सुदूरपश्चिममा संक्रमण बढेको बढ्यै- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
सुदूरपश्चिममा संक्रमण बढेको बढ्यै
असार अन्तिम साता १५ प्रतिशत रहेकोमा साउन पहिलो साता ३७ प्रतिशतमा उक्लियो
श्रावण २६, २०७८ अर्जुन शाह
धनगढी — सुदूरपश्चिममा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण दर ह्वात्तै बढेको छ । आईसीयू र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने बिरामीको संख्या पनि पछिल्ला दिनमा बढेको छ । आइतबार ६ जना संक्रमितको आईसीयू र ७ जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार गर्नुपरेको छ भने सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत संक्रमितको कुल संख्या २५ जना छ । जबकि साउन १ गते आईसीयूमा ५ जना र भेन्टिलेटरमा ३ जना मात्रै थिए ।
आइतबारसम्ममा संक्रमण दर निकै उच्च देखिएको छ । सोमबार सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा १ सय ६७ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा २५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप श्रेष्ठले बताएका छन् । ‘संक्रमण दर २० प्रतिशतभन्दा माथि हुनु भनेको जोखिम दर उच्च हुनु हो,’ स्वास्थ्य निर्देशक डा. गुणराज अवस्थी भन्छन्, ‘आइतबार करिब ५० प्रतिशत संक्रमण दर पुगेको थियो । हामीले उच्च सतर्कताका साथ सबै हिसाबले तयारी हालतमा बस्नैपर्ने छ ।’ डा. अवस्थीका अनुसार असारको अन्तिम साताभन्दा साउनको पहिलो साता पीसीआर रिपोर्टका आधारमा संक्रमण दर दोब्बर बढेको देखिएको थियो । उनले भने, ‘निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको तथ्यांकबाट पुष्टि हुन्छ ।’
नेपालमा कोरोना संक्रमणको सुरुवाती चरणमै प्रभावित भएको सुदूरपश्चिम दोस्रो चरणमा पनि उत्तिकै प्रभावित रहेको थियो । दुवै चरणमा कैलाली र कञ्चनपुर त हटस्पट नै बनेका हुन् । निर्देशनालयका अनुसार आइतबारसम्म मृत्यु हुने संक्रमितको संख्या ५ सय ७८ पुगिसकेको छ । स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार असार महिनामा १४ जना संक्रमितको मृत्यु भएको थियो । साउनको तेस्रो सातासम्म मृत्यु दर घटेको भए पनि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा शुक्रबार एकै दिन २ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । लामो समयपछि फेरि एकै दिन २ जना संक्रमितको मृत्युको घटना असार ४ गतेपछि पहिलो पटक शुक्रबार दोहोरिएको हो । साउन ३ गते एक जना र साउन ५ गते एक जना गरी शुक्रबारअघि साउन महिनामा २ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै साउन पहिलो सातादेखि सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमण दर उकालो लागेको देखिएको हो । असारको अन्तिम सात दिनमा १५ प्रतिशत रहेको संक्रमण दर साउनको पहिलो साता ३७ प्रतिशतमा उक्लिएको देखिएको थियो । स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार साउनको पहिलो साता सुदूरपश्चिमको संक्रमण दर ७ वटै प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै रहेको देखिएको थियो । निर्देशनालयका अनुसार असार १ गतेका दिन २५ जना संक्रमितको आईसीयूमा र ७ जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको अवस्था थियो । तर असारको तेस्रो सातातिर पुगेपछि सुदूरपश्चिमका अस्पतालहरूमा भर्ना गर्नुपर्ने बिरामीको संख्या र मृत्युदर पनि कम भएको थियो ।
पूर्वतयारीका क्रममा सबैभन्दा बढी सीमामा ध्यान दिने तयारी गरेको निर्देशक डा. अवस्थीको भनाइ छ । कैलालीको गौरीफन्टा र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी संख्यामा आवतजावत हुने सीमानाका हुन् । नाकामा व्यवस्थित गर्नकै लागि हाल दुवै नाकामा एक/एक हजार अटाउन सक्ने होल्डिङ सेन्टर निर्माण भइरहेका छन् । साथै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले धनगढी र महेन्द्रनगरमा थप ५० शय्याको कोभिड अस्पताल पनि निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।
यस्तै, बालबालिका प्रभावित हुन सक्ने अनुमानमा हरेक जिल्ला अस्पतालमा बालबालिकाका लागि १० वटा विशेष शय्या निर्माण कार्य भइरहेको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । ठूला अस्पतालमा कुल शय्या संख्याको २० प्रतिशत बालबालिका लक्षित गरी तयारी भइरहेको अस्पतालहरूले जनाएका छन् । सुदूरपश्चिमका १२ वटा सरकारी अस्पतालमा गरी ९ सय ७७ शय्या संख्या छ । एचडीयू बेड संख्या १ सय ४३ रहेको छ । आईसीयू बेड ६९ छन् भने भेन्टिलेटरको संख्या ३५ रहेको छ ।
यीमध्ये कोरोना संक्रमित बिरामी राख्नकै लागि व्यवस्थापन गरिएका एचडीयू बेड संख्या १ सय ३०, आईसीयू ५४ र भेन्टिलेटर संख्या २१ रहेको निर्देशनालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
सुदूरपश्चिमको रेफरल अस्पतालका रूपमा रहेको धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा रहेको कोभिड अस्पताल । तस्बिर : कान्तिपुर
प्रकाशित : श्रावण २६, २०७८ १३:४१
लयमा फर्किंदै आन्तरिक पर्यटन
निषेधाज्ञा खुकुलिएपछि खुल्न थाले होटल, रिसोर्ट
श्रावण २६, २०७८ अगन्धर तिवारी
पर्वत — निषेधाज्ञाका कारण पछिल्लो ३ महिना थला परेको पर्वतको आन्तरिक पर्यटन चलायमान हुन थालेको छ । व्यवसायीले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर निर्माणाधीन तथा निर्माण भइसकेका पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्न थालेका हुन् ।
विशेष गरी पुल पर्यटनकै कारण चर्चामा आएको सदरमुकाम कुस्माबजार एक वर्षयता बन्जी र जिपलाइनका कारण पनि चर्चामा छ । बन्जी र निर्माणाधीन जिपलाइनकै कारण कुस्मामा दिनानुदिन सुविधासम्पन्न होटल थपिँदै गएका छन् । ‘कोरोना महामारी नभएको भए होटल खचाखच हुन्थे,’ कुस्माका व्यवसायी ओम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘निषेधाज्ञा केही खुकुलो हुनासाथ आन्तरिक पर्यटक आउन थालेका छन् ।’ पछिल्लो पटक गरिएको निषेधाज्ञा केही खुकुलो भएसँगै श्रेष्ठले आफ्नो होटल स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड अपनाएर खुलाएको बताए ।
निषेधाज्ञा खुकुलो भएसंगै निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित आकासे पुल, यान्त्रिक पुल, बन्जी, रिसोर्ट, होटल तथा सरकारी लगानीका अग्ला झोलुङ्गे पुलमा आउजाउ खुला गरिएको छ । सार्वजनिक यातायात खुला गरिएसँगै अरू जिल्लावासीको आउजाउ बढ्न थालेको हो । सार्वजनिक सवारीमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डसहित यात्रा गर्न पाएपछि बन्जी गर्न आएका पाल्पाका हितेन्द्र थापाले बताए । ‘लामो समय घरमै बस्दा निकै अत्यास लागेको थियो,’ उनले भने, ‘लकडाउन खुलेपछि पहिलो पटक बन्जी हेर्न आउने रहर थियो । पूरा गर्न पाएकोमा खुसी लागेको छ ।’
निर्माणाधीन पर्यटकीय पूर्वाधारको कामसमेत धमाधम अघि बढेको छ । निर्माणाधीन जिपलाइन दसैंभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको हार्नेस जिपलाइनका निर्देशक नरेन्द्र खत्रीले बताए । उनका अनुसार जिपलाइनको काम अन्तिम चरणमा छ । जिपलाइनको अवतरण हुने स्थान कुस्मा–४ को साउनेबगरमा कालीगण्डकीबीच रिसोर्टको कामसमेत तीव्र गतिमा भइरहेको छ । ‘पहिला जिपलाइनको काम सकेर यो सुरु गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘रिसोर्टलगायत अरू संरचना बनिरहेका छन् ।’ ७ युवाको करिब १३ करोडको लगानीमा निर्माणाधीन जिपलाइनको ९० प्रतिशत काम सकिएको छ । जिपलाइन र हाइड्रोलिक पिङको काम सकिनै लागेको अर्का सञ्चालक राजकुमार बस्नेतले बताए ।
पर्वतमै निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित कुस्मा–बलेवा यान्त्रिक पुल पनि सञ्चालनमा आउन थालेको छ । स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर सिट क्षमताको आधा यात्रु ओहोरदोहोर हुने यान्त्रिक पुलका प्रबन्धक चिरञ्जीवी रेग्मीले बताए । बन्जीका सञ्चालक नेत्र पराजुलीका अनुसार दर्जनौं कर्मचारीलाई चलायमान गराउन र सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्न पनि खोल्नु परेको बताए । ‘हामीसँग ७१ कर्मचारी हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको खर्चमात्रै मासिक २० लाख रुपैयाँभन्दा धेरै हुन्छ । प्रशिक्षित कर्मचारी हटाए नयाँ पाउन गाह्रो हुन्छ । नहटाउँदा खर्च धान्न सकिएन ।’ कोरोना संक्रमण बढेमा पुनः बन्द गर्ने गरी दैनिक १०–१५ जनासम्मलाई बन्जी गराइएको उनले बताए ।
बन्जी, यान्त्रिक पुल र अग्ला पुलमा आउजाउ खुला भएसँगै होटल र यातायात व्यवसायीले केही राहत महसुस गरेका छन् । ‘अब केही हुन्छ कि जस्तो छ,’ व्यवसायी सागर गिरीले भने, ‘लामो समय सवारी थन्क्याउनु पर्दा बैंकको किस्ता र ब्याजले थिचेको छ । उठ्नै सकिएन ।’ होटल व्यवसायी हरि सुवेदीले अरू व्यवसाय खुलेसँगै खाजा खान आउनेको संख्या बढेको बताए । उनका अनुसार बन्जी, स्काई साइक्लिङ र अग्ला पुल हेर्न आउनेको चहलपहल बढेको छ । निषेधाज्ञा खुकुलो भए व्यवसाय पुरानै लयमा फर्किने आशा व्यवसायीको छ ।
प्रकाशित : श्रावण २६, २०७८ १३:२६